मोबाइलमा भएको फोटो डिलिट भयो ? चिन्ता नगर्नुस्, यसरी पुन: प्राप्त गर्न सकिन्छ
Fri, Jun 5, 2020 at 4:43am
पूर्वमन्त्री मातृका यादवद्वारा ५० पत्रकारको कोरोना बिमा #आहा खबर# क्वारेन्टिनमा बस्ने महिलालाई स्यानिटरी प्याड र बालबालिकालाई दूध दिदैं टीकापुर नगरपालिका #आहा खबर# कोरोनाविरुद्ध नेपालले निर्माण गरेकाे खाेपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनकाे चासाे #आहा खबर# जुम्लामा क्वारेन्टाइनमा बसेका १ वृद्धको मृत्यु, मृतकको स्वाब संकलन #आहा खबर# रुकुम घटनामा संलग्न थप ७ जना पक्राउ #आहा खबर# निजी विद्यालयले असार १ देखि नयाँ भर्ना सुरू गर्ने #आहा खबर# विदेशबाट फर्किनेले हवाई भाडा आफै तिर्नुपर्ने #आहा खबर# क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किएपछि मृत्यु भएका सुर्खेतका युवककाे रिर्पाेट पोजिटिभ #आहा खबर# बैतडी बलात्कार घटनाका दोषीले पाए साढे ११ वर्षकाे कैद सजाय #आहा खबर# लकडाउनमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र बजार खाेल्न नदिइने #आहा खबर# सीमा समस्यामाथि त्रिविले सुरू गर्याे अनुसन्धान #आहा खबर# विदेशमा अलपत्र परेका पचासौं हजार फर्काउन यस्तो छ तयारी, ३३६ नेपालीलाई आजै स्वदेश ल्याइने #आहा खबर# अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावको संघारमा ओबामा सक्रिय, ट्रम्पको कडा आलोचना #आहा खबर# ‘अप्ठेरो परिस्थितिले संघीय शासन प्रणालीको औचित्य पुष्टि’ #आहा खबर# नेपालमा २६ सय नाघे कोरोना सङ्क्रमित, कहाँ कति थपिए ? #आहा खबर#
बिहिवार, ९ असोज २०७६,	आहाखबर	19.47K
कहिले काँही आफूले नचाहँदा नचाहँदै वा झुक्किएर फोटोहरु डिलिड हुन पुग्छन् । तर त्यसको लागि तपाईंले धेरै चिन्ता गर्नु जरुरी छैन । किनकी यसरी हराएका फोटोहरु पुन प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
यसरी गर्नुस् फोटो सुरक्षित
मोबाइलमा खिचिएका फोटोलाई सुरक्षित गर्ने केही उपायहरु रहेका छन् । एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा गुगल फोटोज नामक एउटा डिफल्ट एप हुने गर्छ । तपाईँ आफ्नो आवश्यक फोटोहरु यस एपमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ । यो गुगल एकाउन्टसँग लिंक हुने गर्छ र यसमा भएको फोटो गुगल एकाउन्टको स्टोरेजमा गएर बस्ने छ ।
गुगल एकाउन्टमा रहेको फोटो जहाँबाट पनि लगइन गरेर तपाई हेर्न या डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ । यदी तपाई आफ्नो स्मार्टफोन परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ । यसपछि त तपाईको फोटो हराउने चिन्ता दूर हुन्छ ।
त्यस्तै अर्को तरिका पनि रहेको छ । तपाईको फोटो डिलिड भएको खण्डमा त्यसलाई रिकोभर वा पुन प्राप्ति का लागि विभिन्न रिकोभर एपहरु र टुलहरुसमेत उपलव्ध छन् ।
तपाईको फोटो हराएको वा डिलिड भएको मोबाइलबाट उक्त फोटो रिकोभर गर्नका लागि तपाईँ गुगल प्लेस्टोरबाट तेस्रो व्यक्तिको एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । यो एपको नाम ‘डिस्कदिग्गर’ हो । यसलाई डाउनलोड गरेपछि तपाईँलाई फोटो स्क्यान गर्ने अप्शन आउने छ । यसमा क्लिक गरेको केही समय भित्रै तपाईँको मोबाईलमा यो एपले सबै फोटोहरु खोजेर ल्याउनेछ ।
यसबाट तपाईँलाई जुन फोन चाहिएको हो, त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुने छ । यसरी तपाईँ आफ्नो पुरानो डिलिट भएको फोटो फेरि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
त्यसैले फोटो हराएकोमा चिन्तित बन्ने गर्नु भएको छ भने इन्टरनेटमा त्यस्ता फोटाहरु हराएको खण्डमा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर खोजी गर्नुहोस् त्यसबाट पनि केही उपायहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ ।